Yurie BSF Isicelo • Yurie BSF
Isicelo se-Yurie BSF
Yurie | -Nov 22, 2018 | Landa isicelo se-Yurie BSF ku-Playsrore
Uhlelo lwe-Yurie BSF luhlelo olwenziwe ngamabomu, ukusiza ukuqaliswa ukulima BSF fly kusuka kumadokhumenti nakuma-video okufundiswa kwimikhuba yokuphumelela yokukhiqiza Izinkomo ze-Maggot/ hoard i-odorless.
I-Yurie BSF ekuklanyeni izinhlelo zokusebenza isebenzisa izinhlinzeko zolimi lwezinhlelo eziyinkimbinkimbi kakhulu. Okuthiwa yi-LIVE Ingxoxo ngaphandle kokuthi uhambe noma uphume isicelo. Ngakho uma kunemibuzo ungakwazi ukuveza ngokushesha.
Ngaphandle kokuba kube yinkimbinkimbi, umthwalo wefayela uphansi kakhulu futhi ulula, okuyi-17 MB. Ngakho ngeke ilayishe umakhalekhukhwini omsebenzisi.
Enye into uhlelo lokusebenza lwe-Yurie BSF luhambisana ne-SOP yesinyathelo ngesinyathelo ukwenza kube lula kubasebenzisi ukusebenzisa zonke izici zesifundo kulesi sicelo.
Futhi okuzuzisa kunazo zonke ngoba kulolu hlelo lokusebenza unamandla okuxhumana nomsebenzisi oyedwa nomunye umsebenzisi. Ngakho kuyasiza kakhulu kubasebenzisi base-Yurie BSF. Landa isicelo se-Yurie BSF
Iyiphi Isigaba isicelo se-Yurie BSF?
Kunezinhlobo eziningi zemikhakha kusukela kwesicelo esiphethwe ku-playstore. Khona-ke uhlelo lwe-Yurie BSF lufakiwe kusiphi isigaba?
Okufakiwe kulo mkhakha ukuthuthukisa ukusebenza nokusebenza kwe-smartphone ye-Android. Izibonelo: 360 Security, Master Clean, Google Translate, Greenify, Recorder Audio, njll.
Izinhlobo zohlelo lokusebenza zenhlalo zenza abasebenzisi baxhumane nabanye abantu abaningi. Isibonelo: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, njll.
Ukuxhumana kohlelo lokusebenza
Ukuhlinzeka izakhiwo kubasebenzisi ukuthi bahlanganyele ngezingxoxo noma ngezwi. Isibonelo: BBM, WhatsApp Messenger, LINE, Facebook Messenger, WeChat, KakaoTalk, njll.
Lolu hlelo lokusebenza lwesigaba lusetshenziselwa kabanzi ngezinhloso zokuthatha izithombe. Izibonelo: Ikhamera360, PicsArt, B612, Magisto, MomentCam, ne-Adobe Photoshop, njll.
Isicelo se-News and Magazine
Izicelo News and Magazines Isicelo kuyinto isicelo izindaba noma umagazini ezingafundwa ngokuqondile HP Isibonelo: BaBe, Kurio, Detik, VivaNews, Kompas, njll. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo.
Isicelo sokuzijabulisa singokuzijabulisa okuningi. Izibonelo: umculo, imidlalo, iTV, ukuhambisa amavidiyo.
Imfundo yohlelo lokusebenza
Uhlelo lwe-Yurie BSF luwela kulolu hlelo, okuwukuthi isicelo semfundo. Ngokuvamile ukusetshenziswa kwalesi sigaba kuhloswe ukusiza emfundweni. Izibonelo: Amageyimu wezemfundo wezingane, i-Smart Kids, i-Smart Mathematics, i-Duolingo: Ukufunda Ulimi Lwe-Free, njll.
Ngoba uhlelo lokusebenza lwe-Yurie BSF luyimfundo ngokwayo lolu hlelo lokusebenza aluvumelekile ukuze abasebenzisi bafunde ngokukhululekile ngaphandle kokuphazanyiswa izikhangiso.
Izikhangiso ezinikezwa ngokuvamile zihlose ukuthola inkokhelo ekhokhwa ngabathengisi. Lokhu kusho ukuthi isicelo samahhala se-Yurie BSF asitholi yinzuzo kusuka kumsebenzisi.
Lokhu kuhlanzekile i-Yurie BSF efuna ukwabelana nge-100%.
Yiziphi izici ku-Yurie BSF Isicelo?
Kunezici eziningi kakhulu kulolu hlelo lokusebenza, okungukuthi
I-Rp100.000.000 Business Aid Fund, -
Ukukhiqizwa kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kwe-SMELL
Iphakethe le-100% yamahhala
Iphakheji le-Silver Plus
Iphakheji le-Gold Plus
Ipakethe yePlatinum Plus
I-Yurie BSF Secret Group
I-Yurie BSF Dot Com
U-Yurie BSF yiyona kuphela inkampani ephayona ukulima i-maggot BSF i-odorless yanamuhla emhlabeni.
Ukukhiqizwa kwemagog okungenasici kusebenzisa imfucuza, udoti, umquba wezilwane. Ukuhlakulela izimpethu I-odorless ayiboni ukuvutshelwa, ayisebenzisi izidakamizwa futhi ayidingi umshini.
Ngakho ukukhiqizwa kwe-maggot kulula futhi kuyabiza, phakathi kwe-Rp. XUMX-Rp. X NUMX ngekg
Lo mnikelo kubangani udonswa kubahlobo baka-Yurie BSF abazithengisa ngenkuthalo i-Yurie BSF.
Inhloso yalolu sizo kungukuthi abangane baka-Yurie BSF baqhubekisele phambili ukwandisa ukukhiqizwa kwe-maggot ne-jul ku-Yurie
Kulesi sici izifundiswa ezihlukahlukene zevidiyo emisebenzini yokulima umlingo ngaphandle kwephunga linikeziwe. Uvele ubuke futhi uwenze ngokuvumelana neziqondiso kuvidiyo.
Amavidiyo wokufundisa kule sici awasakazwa kuma-social media naku-youtube. Ngoba le vidiyo nedokhumenti inikezwa ngqo ngabangane baka-Yurie.
Ukufunda ukuhlakulela mahhala i-100% umgogodla, le phakheji ngokukhethekile kulabo abangakwazi ukukhokhela iphakheji elikhokhelwayo. Imigomo nemibandela sicela uxhumane noMbak Yurie ku-0812-2105-2808.
Kungani isicelo se-Yurie BSF esibalulekile?
Ngoba lolu hlelo lokusebenza ithuluzi lomsebenzisi kumkhuba wokulima umlenze ngaphandle kokuhogela
Ngaphambi kokuba usebenzise, ​​ungafunda ngokubuka amavidiyo wokufundisa kulesi sicelo. Ngakho uma uya epulazini kukhona incazelo yokuqala.
Ngemuva kokuzijwayeza, zivame ukuba izinto ezincane esizikhohlwayo, noma nje sifuna ukuzikholisa lapho sisebenza ekhaya, khona-ke kufanele uvule lesi sifundo sevidiyo.
Izibuyekezo zakamuva kokubili ngendlela yamavidiyo kanye namadokhumenti abalulekile zibuyekezwa ngalolu hlelo lokusebenza, ngakho-ke noma ngabe ukuphi uzothola izaziso zakamuva nezibuyekezo mayelana nokutshalwa kwemaggot ngaphandle kokuhogela.
Bobabili abaqalayo kanye nabadala bayodinga izibuyekezo zokuthuthukiswa kwebhizinisi le-maggot futhi ulwazi luthunyelwa ngalolu hlelo lokusebenza.
Isicelo se-Yurie BSF sithinta kanjani ukuphumelela kwezilwane ze-Maggot?
Ngokwenzayo kunesidingo sokuqondisa ngqo nokungaqondile. Futhi lezi zinyathelo ngokuzenza.
I-video yomkhuba kuhlelo lokusebenza ihlelwe ngendlela yokuthi ibe isinyathelo ngesinyathelo ngokulandelana futhi kune-SOP (inqubo yokusebenza evamile). Ngakho-ke kukhona ukufanelana kwezindlela zomsebenzi futhi empeleni imiphumela nayo kulindeleke ukuba ifane (hhayi okhubazekile)
Abangani baka-Yurie yonke indawo ngokulandela imihlahlandlela yesicelo kulindeleke ukuthi bafinyelele ekuhlosweni kokuvuna kwamakhulu kagg of maggot ezinyangeni ezingaphansi kwe-1,5.
Futhi ukufeza lokhu kungukulandela ukufundisa kwevidiyo okwamanje. Ngakho lolu hlelo lokusebenza lubaluleke kakhulu futhi luyadingeka kakhulu ukuze kufezekiswe imigomo yokukhiqiza yamaggot ngemiphumela eningi neyiphunga.
Izinzuzo kanye nokusetshenziswa kwezicelo ze-Yurie BSF
Akugcizelelwe ngoba izinyathelo zomsebenzi zicacile
Kunezindlela ezihlelekile zokunciphisa amaphutha nokushiya.
Ukukhiqizwa komlingo wansuku zonke kunokwethenjelwa nokuzimela ngokwengeziwe
Ihlelwe kangcono ekukhiqizeni umkhiqizo we-maggot.
Idalwe amazinga wokusebenza ngemiphumela yokhonkolo
Yiba namathuluzi wokuhlaziya ukuze uthuthukise ukukhiqizwa
Yiba nomhlahlandlela wokuhlola umsebenzi okwenziwe.
Ukwakha umjaho ophephile futhi okhululekile ukwenza ngokushesha umsebenzi we-maggot.
Kuhleleke futhi kusebenza kahle.
Isiqondiso ekusebenzeni imifino yamaggot nsuku zonke.
Gwema umsebenzi wokuqokwa.
Uma kukhona iphutha, kulula ukupheqa futhi ukuhlaziya
Inqubo yomsebenzi iqinisekisiwe futhi ingasebenza kahle ezimweni.
Ukufingqa kwezicelo ze-Yurie BSF
Umhlahlandlela wokufundisa kulesisicelo yithuluzi futhi imoto ephumelelayo ihlakulela i-maggot ngaphandle kwephunga.
Lolu hlelo lokusebenza lunethonya elikhulu ekuphumeleleni izinga lokuvuna amakhulu amakhilomitha ngaphansi kwezinyanga ezingu-1,5.
Ukulandela imihlahlandlela yesicelo kuqinisekisa ukuthi uphumelela ekhiqizweni kwemaggot amaningi, ukukhiqizwa okuqhubekayo, ngaphandle kokucindezeleka, ephephile, ukunethezeka, nokwandisa ukuzethemba kungadala ukulimala kwamaggot okwesikhathi eside.
I-99 Indawo ye-Maggot ngaphandle kwe-Bau Ranch
Ukuhlaziywa Okuyisine kwe-Maggot Ukulima Isilinganiso
Ukumaketha nokuthenga nokuthengisa i-Maggot
I-FAQ Yokulima KaMaggot
Yurie BSF Yephusi